Araho ny fehezanteny WWDC 2016 mivantana avy any amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Eto isika dia eto ny andro nandrasana hatry ny ela izay nanatonan'i Tim Cook, sy ny mavesatra sasany an'ny orinasa paoma manaikitra ny sehatry ny foibe fivorian'ny fivoriambe Bill Graham Civic Auditorium any San Francisco, hanombohana ny lahateny ifotoran'ny WWDC 2016.
Amin'ity keynote ity dia avo dia avo ny fanantenana raha mifantoka amin'ny rafitra fiasa Apple vaovao ho an'ny Mac (miaraka amin'ny anarana vaovao isika macOS), iPad, iPhone, Apple TV ary Apple Watch. Androany no hahitantsika ny vaovao avy any Apple tonga amin'ny Mac amin'ny endrika fanovana anarana na ny sisa amin'ireo rafitra fiasa. Ao amin'ny Mac avy any Mac aho dia efa vonona ny zava-drehetra hahafahanao mahita ary manome hevitra anay aminay izay asehon'izy ireo anay ao manomboka amin'ny 19:XNUMX hariva any Espana (adiny iray latsaka any amin'ny Nosy Canary).
Mba hanarahana ny hetsika dia manana safidy marobe isika, saingy tsy misy fisalasalana ny fomba tsara indrindra dia avy amin'ny avy any Mac aho na bilaogy rahavavintsika: Vaovao IPhone y Vaovao IPad. Ireo no ambiny fandaharam-potoana manerantany raha hijery ny keynote hatramin'ny voalohany:
México 12: 00
Kolombia: 12: 00
Arzantina: 14: 00
Shily: 14: 00
Peru: 12: 00
Ekoatera: 12: 00
Venezoela: 12: 30
Repoblika Dominikana: 13: 00
Costa Rica: 11: 00
Guatemala: 11: 00
Puerto Rico: 13: 00
Bolivia: 13: 00
Uruguay: 14: 00
El Salvador: 11: 00
Panama: 12: 00
Honduras: 11: 00
Paraguay: 13: 00
Nicaragua: 11: 00
Kiobà: 13: 00
1 Keynote avy amin'ny Mac aho
2 Podcast post-keynote
Keynote avy amin'ny Mac aho
Ny momba ny fanaovana fandrakofana be dia be amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny lahatsoratra ary koa ny fampiasana ilay fitaovana ampiasainay amin'ny fampisehoana Apple rehetra ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho latsa-danja izany. Mba hahafahana maneho hevitra amin'ireo rehetra hitantsika amin'ity hetsika ity ary hampiasa ny resak'izy ireo. Tsy mila mamelombelona na inona na inona isika, manokatra ity lahatsoratra ity izahay ary mijery, maneho hevitra ary mankafy ny teny fototra.
Blog WWDC Live 2016
Vao tapitra ny famelabelaran'i Apple ary raha vao manomboka ao amin'ny bilaogy isika dia afaka mihaino mivantana ny Podcast an'ny iPad Actualidad avy amin'ny SpreakerAmin'ity podcast ity dia manana chat mifangaro izay hamakiantsika ny fanontanianao rehetra na ny hevitrao momba ity WWDC ity. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny 23: 30-23: 45 eo ho eo (Fotoana peninsular Espaniola).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Araho ny fehezan-teny WWDC 2016 mivantana avy any Mac avy any Mac aho
Amazon dia te-hifaninana amin'ny Apple Music sy Spotify